Madaxweyne Xasan: “Soomaliya waxaa ay u baahan tahay dhismaha Ciidan Qaran” – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Max’uud ayaa golaha amaanka ee Qaramada midoobey ka dalbaday in ay ka caawiyaan dhismaha Ciidanka Milatariga Soomaaliya si ay ula wareegaan amniga dalka.
Madaxweynaha ayaa isaga iyo Banki moon waxaa ay shirguddoominayeen shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay ka qeybgaleen Ra’isalwasaaraha Dalka Turkiga,midka Ingiriiska iyo Waddamada ay Ciidamada ka jooogaan Soomaaliya ee magaca AMISOM ku howgala.
Madaxweyaha ayaa sheegay in haddii la helo Ciidan hanan kara amniga dalka in laga maarmi karo Ciidamada AMISOM ee hadda caawiya Dowladda Soomaaliya.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in waqtiga kalaguurka loobahanyahay in Doowladda laga garab istaago si hufan laguna tageero in lahelo Ciidamada Soomaliyeed oo beddela AMISOM oo lawareega nabadgelayada Waddanka.
Dhinaca dhaqaalaha oo uu kahadlay waxaa uu sheegay in uu wanaagsan yahay Dalku,hase ahaatee waxaa uu soo hadal qaaday in Doorashada 2016-ka oo la isku raacay in aysan noqon karin Qof iyo cod taasna waxaa uu sheegay in la isku raacay Dhismaha Gole wadatashi oo kasoo talabixiya nooca doorashada Dalka ka dhici karto iyada oo ay barabar socdaan latashiyada Bulshada meel kasta oo ay joogto.
Madaxweynaha Doowlada Federaalka ayaa kahadlay Xaladda Bini’adinimo ee Soomaaliya,waxaana uu sheegay in 3 Milyan oo Dad Barakacayakacayal ah weli ay ku tiirsanyihiin gacanta deeq bixiyayaasha taas oo muujineysa Heerka Saboolnimada Soomaaliya ay garsiisantahay.